ပစ္စတင်လှံတံကို ဟိုက်ဒရောလစ် နူမာမစ်၊ အင်ဂျင်နီယာစက်များ၊ ပစ္စတင်တံဖြင့် မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်တိုင်ပလပ်စတစ်စက်များ၊ ထုပ်ပိုးခြင်းစက်များ၊ ပုံနှိပ်စက်များ၊ ကြိတ်စက်၊ အထည်အလိပ်စက်များ၊ ဝင်ရိုးပါသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်ပစ္စည်းများ၊ linear optical ဝင်ရိုးဖြင့် မျဉ်းဖြောင့်ရွေ့လျားမှုဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် အဓိကအသုံးပြုပါသည်။
ပြင်ပအချင်း- Ø 6mm-35mm
စုစုပေါင်း အရှည်- 100mm-650mm
Chrome အထူ- 10~25 μm
Chrome မာကျောမှု- 900 HV အနည်းဆုံး
ကြမ်းတမ်းမှု- Ra 0.1 Micron Max
Bend Test ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ
ထောက်ပံ့မှုအခြေအနေ 1. Hard Chrome Plated
2. QPQ ကုသမှု
3. Induction Hardened
ပစ္စတင်လှံတံသည် ခရိုမီယမ်အလွှာထူထပ်သော အထူအပါးဖြင့် အုပ်ထားသော စတီးအလွှာမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ခရိုမီယမ်ကို ခဲဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ၎င်း၏အထူသည် အများအားဖြင့် 10 မှ 30 မိုက်ခရိုမီရွန်တွင်ရှိပြီး၊ ခရိုမီယမ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်သည့် မာကျောမှု၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ အပူခံနိုင်ရည်နှင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
hard chrome plated piston rod ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ ၊
1) cathode လက်ရှိထိရောက်မှု 25% ~ 35% အထိမြင့်မားပြီး အပ်နှံမှုနှုန်းသည် အလွန်မြန်ဆန်သည်။
2) မြင့်မားသောမာကျောမှု (900 ~ 1200HV)၊ ယူနီဖောင်းနှင့်သိပ်သည်းသောကွန်ရက်အက်ကြောင်းများ၊ ကောင်းသောပွန်းပဲ့ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ Microcracks များကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး microcracks အရေအတွက်သည် 800-2000/cm (လိုအပ်မှုအရ) သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီးဆန့်ကျင်မှုကိုတိုးတက်စေသည် corrosion စွမ်းရည်။
3) ကောင်းစွာပျံ့နှံ့နိုင်သောရေချိုးခြင်း၏စွမ်းရည်၊ အပေါ်ယံပိုင်း၏ယူနီဖောင်းအထူ၊ ကြမ်းတမ်းသောအဖုအကျိတ်၏ဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်လုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ ခရိုမီယမ်အလွှာ၏အသွင်အပြင်သည်တောက်ပချောမွေ့သည်။
4) အပေါ်ယံလွှာသည် အလွှာနှင့် ခိုင်ခံ့သော ချည်နှောင်မှု အားကောင်းပြီး ပြုပြင်ခြင်းသည် ရိုးရာနည်းပညာနှင့် ဆင်တူပြီး လည်ပတ်မှုသည် သမားရိုးကျ လုပ်ငန်းစဉ်ထက် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။
5) ရေချိုးခန်းထဲတွင် trivalent chromium ၏ပါဝင်မှုကို ကျယ်ပြန့်စေရန် ခွင့်ပြုထားပြီး trivalent chromium အတွက် electrolysis ကို ရပ်ဆိုင်းရန် မလိုအပ်ပါ။
6) ပလပ်စတစ်ဆားဗစ်တွင် ဖလိုရိုက်မပါ၊ ရှားပါးမြေကြီးဒြပ်စင်များမပါဝင်ဘဲ ပါဝါနည်းခြင်းမရှိသော workpiece ၏ သံချေးတက်ခြင်းမရှိပါ။
၁)။ ဟိုက်ဒရောလစ် ပစ္စတင်တံ၏ လုပ်ငန်းစဉ် စီးဆင်းမှု။
35 သံမဏိအသုံးပြုထားသော ချိတ်ဆက်လှံတံ၊ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနည်းပညာ- အအေးဆွဲထားသော စဉ်ဆက်မပြတ်လတ်ဆက်သော ကြိမ်နှုန်းအား အလှည့်အပြောင်းတစ်ခု မာကျောစေခြင်း၊ ဆလင်ဒါကြိတ်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ဆလင်ဒါကြိတ်ခြင်း ဒဏ်ငွေဖြင့် ကြိတ်ခွဲခြင်း ဆလင်ဒါဖြတ်ခြင်းအပိုင်း။ ကြိတ်ခြင်း။ ပစ္စတင်တံ၏ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက်၊ chrome ပလပ်မပေါ်မီတွင် စူပါအချောသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
၂)။ Piston rod အဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ စစ်ဆေးခြင်း - ချိတ်ဆွဲပစ္စည်းထုပ်ပိုးခြင်း - ဓာတုဗေဒဆေးရည် ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်လှေကားဆီ - ရေ - အသက်ဝင်အောင် ချဉ်ရည်သုတ်ခြင်း - ရေဆေးခြင်း - အခိုက်အတန့် ၊ ပစ္စတင်လှံတံ ခရိုမီယမ် ပစ္စတင် ၊ ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်ရေ - ရေဆေးခြင်း - တွဲလောင်းချိတ်ဆွဲခြင်း - စစ်ဆေးခြင်း
3. ပစ္စတင်တံကို ထုပ်ပိုးခြင်း။
တံတိုင်းတစ်ခုစီကို ဦးစွာဆီလိမ်းပြီး အလွှာနှင့်အလွှာ၊ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ခွဲသွားပါမည်။
သေးငယ်သောသေတ္တာတစ်ခုစီသည် သံချေးတက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် VCI အိတ်ကိုအသုံးပြု၍ ပြီးနောက် သစ်သားလွှာထဲသို့ထည့်ပါ။
အလေးချိန်နှင့် အရွယ်အစားကို customer လိုအပ်ချက်အရ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Q1 သင်သည် ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုလား။
A1: ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး မော်တော်ယာဥ်အစိတ်အပိုင်းများကို တင်ပို့ရန် လိုင်စင်ရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုင်းမှာ ၁၀ နှစ်ရှိပါပြီ။
Q2။ ဘယ်လို အစိတ်အပိုင်းတွေ ပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲ။
A2: 1.Shock absorber 2. Piston rod 3. Oil seal 4. Rubber parts 5. Powder metallurgy parts စသည်တို့။
Q3။ မင်းရဲ့ထုတ်လုပ်မှု Lead Time ကဘာလဲ။
A3: ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းသည် ပြက္ခဒိန်ရက် 30 ဖြစ်သော်လည်း PO ပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ အရေအတွက်။
A4: ကျွန်ုပ်တို့သည် အနောက်တိုင်းသမဂ္ဂ၊ T/T၊ L/C မှပေးချေမှုကို လက်ခံပါသည်။ သာမာန်၊
30% ကြိုတင်အပ်ငွေ၊ 70% လက်ကျန်ငွေကို ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ
Q5။ Dispatch Port ?
A5: ကွမ်ကျိုး၊ နင်းဘို၊ ရှန်ဟိုင်း
Q6။ အခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ပေးနိုင်သနည်း။
A6: OEM ဝန်ဆောင်မှု၊ ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်အတွက် ဒီဇိုင်းပုံဆွဲခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ရန် ကြိုဆိုပါသည်။
စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု၊ သင်၏ထုပ်ပိုးမှုကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီနိုင်ပါသည်။
Q7။ အာမခံကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
A7: အာမခံကာလအတွင်း၊ မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကြောင့်မဆိုပျက်စီးခြင်း။
Q8: မင်းရဲ့နမူနာကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
A8: လိုအပ်သောအရွယ်အစားကို ဦးစွာပြောပြပါ၊ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိမော်ဒယ်မှ၎င်းကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားပါ၊ လက်ရှိမှိုရှိပါကနမူနာများသည်အခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်၊ လက်ရှိမှိုမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဆင်တူသောအရွယ်အစားကိုပေးဆောင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်မှိုအသစ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ယခင်- Kitchen Cabinet door lift-up system Gas Spring
နောက်တစ်ခု: စိတ်ကြိုက် Stainless Steel ပါးလွှာသော ပြားချပ်ချပ်ချပ်ချပ်များ
တရုတ် Piston Rod စက်ရုံ
Chrome Plated Piston Rod ၊
Damper Shaft Piston Rod ၊
Hard Chrome Plating Piston Rod ၊
Hollow Piston Rod ၊
Piston Rod စက်ရုံ
Shock Absorber Piston Rod ၊